Abaphathi beshishini lokuhamba bahlala bezibophelele kwimo engqongileyo kunye nozinzo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abaphathi beshishini lokuhamba bahlala bezibophelele kwimo engqongileyo kunye nozinzo
Nangona lo mfanekiso oxubileyo, abaphathi babonakala becinga ukuba ukuhamba kudlula amanye amacandelo xa kufikwa ekunciphiseni ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse.
Njengoko iinkokeli zehlabathi zidibana eGlasgow kwi-COP26, inkomfa yeZizwe eziManyeneyo yokutshintsha kwemozulu, uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon, iqinisekisa ukuba abaphathi abaphezulu beshishini lokuhamba bahlala bezibophezele kwimo engqongileyo kunye nokuzinza.
I-ajenda ye-COP26 kulo nyaka iza kumisela unciphiso ekujoliswe kuko ngo-2030 oluya kuxhasa ukufikelela kwi-net zero ezikhutshwayo zekhabhoni embindini wenkulungwane. Amazwe kunye namahlakani ecandelo labucala nawo aya kuxoxa ngendlela yokukhusela uluntu kunye neendawo zokuhlala zendalo. I-WTM London ibisoloko iphambili kukhenketho olunoxanduva noluzinzileyo iminyaka emininzi kwaye inenkqubo ezinikeleyo yokhenketho olunenkathalo kuwo wonke umsitho ukusukela ngo-1994.
Kulo nyaka, iNgxelo yoShishino lwe-WTM ibuze malunga neengcali ezingama-700 ezivela kwihlabathi liphela, kunye nabahambi base-UK abali-1000, malunga nezimo zabo zozinzo kunye nendlela edlala ngayo kwiinkqubo zabo zokuthatha izigqibo.
Iimpendulo ezivela kwiingcali zibonisa ukuba ishishini lokuhamba lithatha uxanduva lwalo ngokungathí sina, kungekhona nje kwindalo yendalo kodwa nakwimpucuko yabantu. Ngaphezu kwento enye kwabane (27%) ichaze ukuba uzinzo yeyona nto iphambili, ze i-43% isithi ikwindawo yesithathu ephezulu.
Malunga nomntu omnye kwabahlanu (22%) bayazi ngokubaluleka kozinzo kodwa abawufaki kwindawo yesithathu ephezulu. Ngaphantsi komntu omnye kwabalishumi (7%) abavumileyo ukuba ngoku ibingeyonxalenye yokucinga kweshishini labo.
Abaphathi beshishini abaphezulu bakwaveze ukuba lo bhubhani ubangele uzinzo kwi-ajenda. Phantse abathandathu kwabalishumi (59%) bathi uzinzo lwaba yeyona nto iphambili ngexesha lobhubhane, omnye kwabane wongeza ukuba yayiyeyona nto iphambili ngaphambi kokuqhambuka kwaye yahlala injalo.
Kule minyaka i-WTM yaseLondon kunye namaqabane ayo okhenketho anoxanduva baye baba negalelo ekuqinisekiseni ukuba incoko ejikeleze ukhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva ludlulela ngaphaya kwemeko kaxakeka yemozulu kwaye ibandakanya amathuba alinganayo emsebenzini, intlawulo efanelekileyo kunye neemeko, impilo, imfundo, ukuxhotyiswa kwamantombazana, ukunciphisa. ukungalingani kunye nokunye.
Umzekelo, i-WTM yaseka i-Just Drop ngo-1998, umbutho wesisa ozinikele ekuziseni amanzi okusela acocekileyo kunye nogutyulo kuluntu olusweleyo noluncede abantu abaphantse babe zizigidi ezibini kwihlabathi jikelele.
Nangona kunjalo, iimpembelelo zohambo kwiplanethi zihlala zicwangciswe ngokukodwa malunga nokukhutshwa kwegesi yegreenhouse evela kwinqwelomoya. Ukulungiswa kwekhabhoni yenye yeendlela zokujongana noku - abahambi kunye nababoneleli banethuba lokunikela ngemali kwimibutho eya kuchitha imali kwiiprojekthi eziya kuphelisa ukukhutshwa kwenqwelomoya yabo. Ukulungiswa kwekhabhoni, nangona kunjalo, akukho ngaphandle kwabagxeki bayo kunye nabahambi ngokwabo, kunye nabanye abakhankaseli bendalo, bahlala beqinisekile.
Iimpendulo ezivela ngaphezu kwe-1,000 yabahambi baseBrithani kwiNgxelo yeShishini ye-WTM ibonise ukuba abane-in-8 ibango lokuba basebenzise i-carbon offsetting - i-15% bathi bahlawule yonke indiza kunye ne-16% benza njalo ixesha elininzi, i-XNUMX% ngamanye amaxesha. Ngomnye kwabathathu owala ngokunyanisekileyo ukumisa iinqwelomoya xa enikwa ithuba lokwenza njalo, isiphumo silungile kancinane sokumisa.
Nangona kunjalo, i-24% eseleyo yaphendula ukuba ingazi nokuba yintoni i-carbon offsetting ithetha, iphakamisa ukuba iinkampani ezizimeleyo kunye noshishino lokuhamba olubanzi kufuneka lunxibelelane nethiyori kunye nokusebenza kwe-carbon offsetting ngokucacileyo ngakumbi. Iinkampani zeenqwelomoya, i-aggregators, i-intanethi kunye nee-arhente ezithengisayo nazo zinendima yokudlala ekuzibandakanyeni nabahambi.
Kwinqanaba leshishini, kukho abanye abaphathi abakwaveze ukunqongophala kolwazi olunxulumene nozinzo. Iinkampani ezininzi ezisuka kumashishini ahlukeneyo zityikitye iphulo leZizwe eziManyeneyo loMdyarho ukuya kuZero, zizibophelele ekukhupheni iqanda lekhabhoni ngo-2050 mva nje.
IBhunga leHlabathi lokuHamba noKhenketho liza kuphehlelela ngokusesikweni i-Net Zero Roadmap yalo kwi-COP26. Le maphu yendlela yoshishino, eyaziswa kancinci ekuqaleni kweyoMsintsi, iya kubandakanya izikhokelo zeendawo ezithile zohambo kunye nokhenketho ecosystem, ukunceda ukukhawulezisa ukuzibophelela kwabo kwimozulu kunye nexesha lokunciphisa ukukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo.
Kodwa xa i-WTM yaseLondon ibuza iingcali malunga nokuba ishishini labo linesicwangciso esisemthethweni "sokunciphisa ikhabhoni", ngaphezu kwesinye kwabane (26%) abakwazanga ukutsho ukuba umgaqo-nkqubo onjalo ukhona. Bangaphezu kwesinye kwabathathu (37%) bathi akukho mgaqo-nkqubo ukhoyo.
Ama-36% aseleyo avumile ukuba kukho umgaqo-nkqubo okhoyo, kodwa ngama-26% kuphela aphumeze lo mgaqo-nkqubo. Umntu omnye kwabalishumi ophumeza uhambo wavuma ukuba umqeshi wabo unomgaqo-nkqubo wokunciphisa ikhabhoni, awuzange uwuphumeze.
Nangona lo mfanekiso oxubileyo, abaphathi babonakala becinga ukuba ukuhamba kudlula amanye amacandelo xa kufikwa ekunciphiseni ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse. Phantse i-40% yathi ukuhamba kuhamba ngcono kunamanye amacandelo kunye ne-21% kuphela ecinga ngokuchaseneyo. Malunga nesinye-kwabane (23%) sibona iinzame zokuhamba zithelekiswa namanye amacandelo, kunye ne-18% yesampulu engaqinisekanga ukuba kuhamba njani.
USimon Press, uMlawuli weMiboniso, iWTM London, uthe: “Ngelixa sizingca ngeenzame zeminyaka engamashumi eminyaka ze-WTM zokukhokela ingxoxo malunga nokhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva, asikhathali. Ezi zinto zifunyanisiweyo zibonisa ukuba sisenayo indlela yokufaka ishishini ngokupheleleyo ngombono wethu wekamva lokhenketho elizinzileyo nelinoxanduva.
Ukuba kukho nantoni na, kufuneka sikhwaze nangakumbi. Imeko yonxunguphalo yemozulu ayihambi kwaye imfuno yokumisa ukufudumala kweplanethi ibalulekile. Kodwa ishishini lokuhamba kufuneka lisebenze ekukhuthazeni iyantlukwano, ubandakanyo kunye neenzuzo zoqoqosho ukuba sifuna uluntu oluhambahambayo, oorhulumente kunye nabalawuli babone ukuhamba kunye nokhenketho njengamandla okwenza okulungileyo, kunokuba kube yinto ekujoliswe kuyo kwaye irhafiswe. "